၂ လကြာအသုံးပြုပြီးနောက် Samsung Galaxy Note 10+ ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည် Androidsis
ငါတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် Samsung Galaxy Note 10+ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုပါ ၀ င်သည်။ ၂ လအသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်ယနေ့တွင်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အချို့သောအချက်များတွင်၎င်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သောလက်ကိုင်ဖုန်းများရှိသော်လည်း အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း၏အချိုးအစားနှင့်မျှတမှုကိုယူလျှင်၎င်းနှင့်အနည်းငယ်နီးစပ်သည်။
Samsung ကဒီ Note Series ကို 10, to အထိသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့တယ် နှစ်ပေါင်းများစွာကသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သောအရာအားလုံးကိုယူဆောင်လာပြီးထုပ်ပိုးပါ ထိုကဲ့သို့သောကျစ်လစ်သိပ်သည်း device ကို၌တည်၏။ ထို့ကွောင့်သင် Note Series ကိုဘယ်တော့မှမစမ်းပါကအရွယ်အစား၊ အလေးချိန်သို့မဟုတ်ပိုကြီးသည့်မျက်နှာပြင်တို့ကြောင့် 10+ နှင့်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ တကယ်တော့နှစ်ခု၊ Note 10 နှင့် Note 10+ တို့မှနောက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံသည်။ ထိုအနည်းငယ်ပိုကုန်ကျ။ ဒီကြီးမားတဲ့ Samsung ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပြမယ်။ လာမည့်နှစ်တွင် Fold နှင့်ပေါင်းစည်းရန်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်ပိုများသည်။
2 အလေးချိန် - Samsung ကမယုံနိုင်စရာကောင်းသည်
3 ဒီဇိုင်း - ရှေ့ဖက်မှကြော့ရှင်းမှု
4 Screen နှင့် Samsung သည်ဘုရင်ဖြစ်နေဆဲပင်
5 Ultrasonic လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ: လုံခြုံရေး, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များနှင့်အတူ
6 Dolby Atmos သည်အကောင်းဆုံးမှတ်စုများကိုတက်နေသည်
7 One UI software အတွေ့အကြုံ
8 သင်သည် S Pen နှင့်တစ်ခါမျှမရဲဝံ့ပါကယခုအချိန်ကောင်းဖြစ်ပါသည်
9 ဘက်ထရီ, ပိုကြာသို့မဟုတ်မလျော့နည်းပါကယူသောအရာကို
10 Note 10+ တွင်ကစားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
11 CPU၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည် - အများဆုံးအဆင့်
12 မှတ်စု 10+ ရှိဓာတ်ပုံ
15 နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက် - သင်သည်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ထပ်မံချစ်မြတ်နိုးမည်
ရိုးရိုး ကျနော်တို့ဖုန်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအင်္ဂါရပ်အဖြစ်ထားရှိမည် Samsung က Galaxy Note 10 မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ screen မတိုင်မီကျော်လွန်သွားဖို့လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မလွဲမရှောင်သာနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်အလေးချိန်အလွန်နည်းသောကြောင့်မည်ကဲ့သို့စီမံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် ၆.၇၈ မျက်နှာပြင်ပါသည့်လက်ကိုင်ဖုန်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအခြားဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမှတ်ချက် ၁၀ သည်လုံလောက်သည်ထက်ပိုမိုနိုင်ပြီးအမှန်တရားမှာသင်သည်ထိုမျက်နှာပြင်ပါသောဖုန်းဖြင့်နေ့စဉ်သွားနေလျှင်၊ တစ်နေ့တာ၊ ပို၍ လေးလံလျှင်၊ လုပ်ပါ
အသုံး ၀ င်သောအသုံး ၀ င်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်များကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Galaxy S10 လိုပဲ။ အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်အမျိုးမျိုးရှိပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအတွေ့အကြုံများကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းလအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၎င်းသည် Samsung ၏အောင်မြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏသင်ကိုယ်တိုင်ပြောခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်တန်ဖိုးရှိအရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
အလေးချိန် - Samsung ကမယုံနိုင်စရာကောင်းသည်
ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်ဒီအင်္ဂါရပ်အတွက်အပိုင်းရှိတယ်။ မိုဘိုင်း သူတို့မှာမျက်နှာပြင်ပိုများလာပြီးနေ့စဉ်အလေးချိန်ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီကိုသုံးတတ်လာတယ် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်စာရင်းနှင့် AOD လျှင်၊ Dolby Atmos၊ စတီရီယိုအသံ၊ ဂိမ်းများစသည်ဖြင့်ကော။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကြီးကြီးနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုရှိသင့်သည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင်သည်းခံမည်၊ သို့မဟုတ်သင့်လက်ဖြင့်ကိုင်နိုင်သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နီးပါးလိုအပ်သောအလေးချိန်ကြောင့်သင့်အားကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Note 10+ သည်ဖုံးမပါဘဲရှိသည် မျက်နှာပြင်နှင့်၎င်းတပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အနည်းငယ်သာအလေးချိန်ရှိသည်။ တကယ်တော့ Samsung ကဒီလောက်များများစားစားနေရာမရအောင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာလူတစ်ယောက်ကအံ့သြနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပိုဂရမ်တွေကပိုလေးတဲ့မိုဘိုင်းလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကွာခြားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ဆီကိုရောက်တဲ့အချိန်ကာလပဲ။
တကယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာတူညီတဲ့တခြားမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေလိုမျိုးပေါ့၊ iPhone 11 Pro Max လိုမျိုးပေါ့ပါးတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့အခါတစ်ခုက slab တစ်ခုရုတ်တရက်ကြီးထွားလာသလိုပဲ။ တကယ်တော့၊ iPhone 11 Pro Max သည် OnePlus7Pro ထက် ပို၍ ပင်အလေးထားသည် သိသိသာသာပေါ့ပါးတဲ့မှတ်စု 10+ ပြီးတော့တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာပြတယ်။ ပြီးတော့အထူမှာအရင်စဉ်းစားတွေးတောနေတာဟာမျှတပါတယ်၊ နေရာသိပ်မပေးရဘူး။ Samsung ကလုပ်ပြီးပြီ
Galaxy Note ကို 10 +
ဖန်သားပြင် 6.5 " 6.67 " 6.8 "
အလေးချိန် 226 ဂရမ် 206 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း ၆၈ ဂရမ်။
ဒီဇိုင်း - ရှေ့ဖက်မှကြော့ရှင်းမှု
Samsung ကဒါကိုပြသရန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည် screen ပေါ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိဖို့ notch လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ဆိုးတဲ့အရာကိုသင်သွားနိုင်ပါတယ် အရာရှေ့အလွန်ကြော့စေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနိမ့်ဆုံး bezel များကိုပေါင်းထည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြော့ရှင်းသောရှေ့ဆုံးကိုကြီးမားသောရှေ့မှောက်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
La နောက်ကျောကဖန် အဲဒီမှာအခန်းသုံးခန်းရဲ့အရွယ်အစားကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဖုန်းကိုဘေးပတ်ပတ်လည်မှာအဖုံးမထားဘဲဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာချန်ထားသောအခါဖုန်းကနည်းနည်းလေးမှေးမှိန်သွားသည်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးနဲ့တူပုံရသည်, ဒါပေမယ့်သူက။ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်သည် S Pen ကိုသုံးပြီး၎င်းကိုတုန်ခါနေသောဖုန်းတစ်လုံးဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်တူညီသောအတွေ့အကြုံမပေးပါ။
Samsung ရဲ့ကိုယ်ပိုင် silicone လိုမျိုးကိစ္စတစ်ခုကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါအရာအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။ အခုတော့ပြားနေပြီ၊ မှတ်စုတွေဆွဲ၊ ဆွဲနိုင်ပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်စုနှင့်အတူုံ။
iPhone 11 Plus နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖုန်း၏အကျယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်အသေးစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဤဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူအနည်းငယ်သာသိသာထင်ရှားပြီးနေ့၏အဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေရန်နေ့စဉ်“ စီမံကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း” လိုအပ်သည် ယူ။ ဤကိစ္စတွင် Note 10+ သည်မည်သည့်နေရာတွင်ပင်ကြည့်ပါစေအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် Samsung ဒီဇိုင်းတွင်၎င်းကို embroiders လုပ်ပြီး Note 10 ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည် သူတို့အားအစွန်းခါးဆစ်၏နှစ်ပေါင်းရလဒ်, ပျောက်ကွယ်သွား bezel နှင့်သူတို့အားတွင်း အခြားဖုန်းများရှေ့မှာအထူးအနေအထားထက်ပိုသောနေရာတွင်ထားသည့်မြင်ကွင်းတွင်။ တကယ်တော့၊ သင်က notch ပါတဲ့ဖုန်းကိုသွားတဲ့အခါမင်းဟာတီထွင်ခဲ့သမျှထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာပဲ (ပြီးတော့အချို့သောသူတို့ကသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့အတူရုပ်ဆိုးလှတဲ့အဆင်းအရောင်ဖြစ်စေတဲ့စွမ်းအားကိုသင်ထင်တယ်) ။
Screen နှင့် Samsung သည်ဘုရင်ဖြစ်နေဆဲပင်
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung သည်ဘုရင်ဖြစ်သည် ပြီးတော့ AMOLEDs ကိုလုပ်တာကြောင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းထက်ပိုနေဖို့လိုတယ်။ တကယ်တော့တခြားထုတ်လုပ်သူတွေဟာ mini-LEDs ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ကြည့်နေကြပြီ။ Samsung မျက်နှာပြင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်သင်ကြည့်ပါစေသူတော်ကောင်းတရားကိုမြင်တွေ့ရမည်။ အသုံးပြုမှုနီးပါးနှစ်လပြီးနောက်။ သင့်မျက်လုံးများကထိုအရာကိုအသုံးပြုနေလျှင်ပင်ဤဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုလွှင့်ပစ်ရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်။
သူတို့၏ ၆.၈ လက်မအရွယ် Dynamic AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် ၄၉၈ စက္ကန့်ရှိသည်ဤကဲ့သို့သော high-end terminal တွင် screen သည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းရှာဖွေရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်ပါ။
Ultrasonic လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ: လုံခြုံရေး, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များနှင့်အတူ
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာပြproblemနာနှင့်ပတ်သက်။ အားလုံးပျော့ပျောင်းနှင့်အတူ နှင့် Samsung ပြီးသား patch ကိုအတူပြုပြင်လျက်ရှိသည်, Samsung ရဲ့ ultrasonic တော်တော်လေးမြန်သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကသင့်လက်ဗွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ယူတဲ့အာရုံခံကိရိယာကိုသုံးနေချိန်မှာဒီမှာအရာအားလုံးကအသံလှိုင်းများဖြင့်သွားသည် ဒီအာရုံခံကိရိယာကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလုံခြုံဆုံးဖြစ်စေဖို့စီမံခဲ့တယ်.
၎င်းသည်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည့်အတွက် Samsung သည်မီးနှင့်လည်းကစားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားသူများနည်းတူချက်ကြိုးကိုမကြည့်ဘဲတီထွင်ဆန်းသစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တရားကတော့ screen ပေါ်ရှိတည်နေရာသည် terminal ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းကိုအလွန်သဘာဝကျစေသည်၊ သင်က၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာပါသည့်ကိရိယာကိုသင်ကြည့်နေသည်ဟုခံစားမိစေရန်၊ Galaxy S10 နှင့်ကဲ့သို့ ဒီဗီဒီယိုမှာ Galaxy Note 10+ နဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတယ်.
Dolby Atmos သည်အကောင်းဆုံးမှတ်စုများကိုတက်နေသည်
တခါတရံတွင်ဤရှုထောင့်ကိုလိုအပ်သောအရေးပါမှုမပေးထားသော်လည်း Galaxy Note 10 ရှိအသံသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ Dolby Atmos ကိုအချိန်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် စီးရီးကစားရန် Spatial အသံခံစားရတယ်, YouTube ရှိဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်နားကြပ်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုကစားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် YouTuber မှဗွီဒီယိုအသစ်ကိုဘေ့စ်သိသာမြင်သာသော်လည်းကောင်းစွာဖြစ်နိုင်အောင်သင်မည်သည့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမဆိုထိုအတွေ့အကြုံကိုဝေမျှနိုင်လိမ့်မည်။ မင်းအမြဲလုပ်နိုင်တယ် Galaxy ၏အသံမှအများဆုံးရရှိရန် UI တစ်ခုကို configure လုပ်ပါ.
S10 မှာ Samsung က s9 ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် Note 10 မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပဲ အများဆုံးတွန့်ဆုတ်အံ့သြနိုင်စွမ်းသောစွဲငြိဖွယ်အသံ။ ဆူညံသံများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက်၎င်းတွင်အသံပမာဏလုံလောက်စွာရှိပြီးနားကြပ်ကိုသွားပြီးပါကအတွေ့အကြုံအဆတိုးများလာသည်။ တကယ်တော့ Galaxy Buds ဖြင့်ကောင်းမွန်သောအသံအတွေ့အကြုံကိုရရှိလိမ့်မည်.
One UI software အတွေ့အကြုံ
သင့်မှာ Galaxy M20 ရှိရင်တောင်၊ One UI ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံကမယုံနိုင်စရာပဲ။ Android 10 သို့သွားမည့်သူတော်ကောင်းတရားကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်မည့်ဤစိတ်ကြိုက်အလွှာမှသင်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ Samsung သည်ကြီးမားသော hardware ရှိသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မျှသာမဟုတ်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့်အတွက်၎င်းသည် Note 10 ကိုသင့်တင့်သောအကဲဖြတ်ရန်အရင်းအမြစ်များနှင့်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ထားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ Android 10 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ သူတို့တစ်ခုမှာ UI ကိုတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
အရောင်အသိပေးချက်များအတွက် AOD အကြောင်းပြောဆိုသည်။ Knox နှင့်အတူလုံခြုံ folder ကို ပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးစာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ညအချိန်အတွက်စာဖတ်ခြင်းစနစ်၊ အတွေ့အကြုံကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြား၊ ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေရဲ့အစွန်းတန်းဘားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း , Samsung မှ Dex ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းမှကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်; ဂိမ်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် Game Booster နှင့်ကပေးသောအတွေ့အကြုံကို personalize ရန်အခြားအဆုံးမဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့လည်းလျစ်လျူရှုသင့်သည် built-in မျက်နှာပြင်အသံဖမ်း, အစွန်းအလင်းရောင်, Bixb လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်y က (သင်၏ Galaxy တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်), ၀ င်းဒိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော QR စကင်နာပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှ PC မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမိုဘိုင်းသို့လွှဲပြောင်းရန် SIM ကဒ် ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတဲ့ဒီဗွီဒီယိုကိုမလွတ်ပါစေနဲ့ သင်၏ Galaxy အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် One UI settings အားလုံး ဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုရန်။
သင်သည် S Pen နှင့်တစ်ခါမျှမရဲဝံ့ပါကယခုအချိန်ကောင်းဖြစ်ပါသည်
နံနက် S Pen ၏ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသူပြီးတော့ဘဝမှာရှိသမျှအရာအားလုံးလိုပဲ၊ မင်းကအဲဒါတွေကိုသင်လိုတဲ့အတွက်သုံးတယ်၊ အဲဒါကို "အေး" သို့မဟုတ် "မည်မျှအေးအေးဆေးဆေးကြည့်" တာကိုသုံးဖို့လိုလို့မဟုတ်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင် S Pen ကထပ်ပေါင်းထည့်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်ထိုနေ့ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျအတန်းကိုသွားသည့်အခါ, သင်လျင်မြန်စွာတစ်ခုခုချရေးဖို့ရန်ရှိသည်သည့်အခါထိုအခိုက်ငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါ သင်က S pen ကိုထုတ်ယူ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုရေးပြီး၎င်းကို၎င်း၏အထိုင်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။ ထိုမှတ်စုကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သင်၌၎င်းရှိသည်။ ဒါကငါကျင့်ရန်လာရန်တွေ့ကြုံသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မှာ S Pen ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးသင်၌ရှိသောကြောင့် ဖိအားများနှင့်အညီမြင့်မားသောတိကျ၏ခံစားချက်။ ပြီးရင်နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုပြတာကအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရစေတယ်။ ၎င်းသည်ပေါ်လွင်ချက်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရှုထောင့်များစွာကိုဖွင့်ပေးသည်
သင်တစ် ဦး မှတ်စုအဘို့မလျှောက်ဝံ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်သင်ထင်ထားသည့်အလေးချိန်ကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုဖွင့်ပေးသောကြောင့်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
Note 10 ရဲ့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတစ်ခု ဒါက ၂၅ ဝပ်မြန်မြန်ပါတယ် တစ်နာရီအတွင်းမိုဘိုင်းကိုအားသွင်းလို့ရတယ်။ ဒါကမသာပေမယ့် ၁၅ မိနစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ၁၅ ကနေရောက်လာရင် ၄၀ ၄၅% အထိရောက်နိုင်တယ်။ ဒီအမျိုးအစားကိုသုံးဖို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာနာရီပေါင်းများစွာရနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာ S10 နဲ့ Note9တို့လိုအခြားဆိပ်ကမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ မြန်သောအားသွင်းခြင်းသည် terminal ကိုအားသွင်းရန်အံ့ဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်သည် သောperfectlyုံကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေ့လုံးကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက PUBG Mobile ဂိမ်းကိုတစ်နာရီလောက်ကစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကကျလာလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပြင် ၈ နာရီအထိရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ၅ နာရီအထိအသုံးပြုသောနာရီနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဒါက သင် terminal ကိုအသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်သည်, သင်မျက်နှာပြင်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဝန်တင်ပြီးနောက်ကတည်းကအတူတူပင်နာရီ။
ကျွန်တော်မျှဝေသည့်မျက်နှာပြင်သည်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုပြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့် Bluetooth ကိုအလိုအလျောက်တောက်ပစေပြီး၊ gmail အကောင့် ၅ ခု (အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုထားသည့်နှစ်ခု)၊ များစွာသောဂိမ်းများကိုဖွင့်ထားသည်။ အမျိုးမျိုးသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်လူမှုကွန်ရက်များဖြစ်သော Chrome ရှိ Instagram, Twitter နှင့် Facebook။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောစားသုံးမှုများရှိသည် (အမှန်မှာဖုန်းကိုစက်ရုံသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်အကြံပေးလိုသည်၊ ပြီးပြီ) ။
Note 10+ တွင်ကစားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ငါတို့ပြောတာ ခဲယဉ်းသောမိုဘိုင်းတစ်ခုတွင်ကြီးမားသောအရည်အသွေးကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်ရှိသည် ၎င်း၏အရွယ်အစားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဒီနာရီကိုပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစတီရီယို dolby atmos အသံကမင်းကိုထိတ်လန့်သွားလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ terminal တစ်ခုရဲ့အပူပေးမှုလည်းဖြစ်တယ်။ PUBG မိုဘိုင်းတွင် 60FPS နှင့်ကစားသည်ကအပူမဟုတ်သလောက်။ ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအခြေအနေကြောင့်ဘက်ထရီကသြဂုတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာငါဖုန်းကိုငါ့လက်ထဲကိုင်ခဲ့စဉ်ကပထမ ဦး ဆုံး firmware နဲ့စားသလောက်မစားဘဲကြီးစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
CPU၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည် - အများဆုံးအဆင့်
ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးပြီးပါပြီ စွမ်းဆောင်ရည်သစ်ကို CPU ကိုနှင့်အတူအောင်မြင်။ အများဆုံးဥပမာမှာ PUBG Mobile ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အပူမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှသတိမပြုမိပါ။ ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများပြခန်းနှင့်အတူရွေ့လျားသောအခါဖိုင်များ၏အဖွင့်နှင့်ရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမထားမိသော UFS ဖိုင်စနစ်အကြောင်းလည်းပြောနိုင်သည်။
ရှိသည့်မှတ်စု 10+ 256GB Internal Memory, 12GB RAM နှင့် Exynos CPU အသစ်၊ 9825၊ ဗိသုကာအသစ်နှင့်ပေါင်း ၃.၀ UFS သည်ယနေ့ခေတ် hardware တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
La ဤအရာအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတန်ဖိုးထားသော "စက်" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားဖြေရှင်းချက်အားလုံးတွင်သာလွန်သည်။ One UI နှင့် Amdroid 10 ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်းစနစ်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung ဖုန်းမှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုပေးနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်စု 10+ ရှိဓာတ်ပုံ
Samsung ၎င်းသည် Note 10 ၏မှန်ဘီလူးများကို S10 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်; တကယ်တော့သင်လုပ်နိုင်တယ် S10 + နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်ဤလှည့်ကွက်များကိုအသုံးပြုပါ။ TOF အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဖမ်းယူနိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောကွင်းဆင်းအဆင့်တွင်ပြတ်သားမှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဒါဟာပုံတူဓာတ်ပုံများအတွက်ဖြစ်ပျက်။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ software zoom ကိုအမြင့်ဆုံးအထိအသုံးချသည့်အခါ Galaxy Note 10+ ၏တွက်ချက်မှုဓာတ်ပုံသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမြင်သောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှု၏“ ပန်းချီ” ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ထွက်မတ်တပ်ရပ် ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုများကိုအလိုအလျောက်ဖမ်းယူနိုင်သည့်နေ့ခင်းဘက်ဓာတ်ပုံများ, ကားများဤကိစ္စတွင်၌ရှိသကဲ့သို့, အရည်အသွေးတစ်ခု iota ဆုံးရှုံးနှင့်အာရုံထဲကပေါ်ထွန်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အလိုအလျှောက် mode ကိုခဲဖွယ်စားဖွယ်များကိုမေ့ပျောက်စေပြီးရလဒ်ကောင်းများအဖြစ်လှပသောဓာတ်ပုံများကိုပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေသည်။
ဒီနှစ်ခုပြ ကောင်းစွာတယ်လီဖုန်းသည်မည်မျှအောင်မြင်ခဲ့သနည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်းb/ w နှင့်အရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤနည်းကို သုံး၍ တက်ကြွသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ရလဒ်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။
el en ပုံတူမုဒ်သည် Pixels ရှိ Google Camera နှင့်အလှမ်းဝေးသည်TOF ၏ကျေးဇူးကြောင့်၎င်းသည်ယခင် Galaxy S နှင့် Note ၏ကင်မရာအက်ပ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ရလဒ်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောရှုထောင့်ကိုရရှိပါကအလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောဓါတ်ပုံများအတွက် ultra wide angle ပေးသည်။ Are:
El Night mode သည်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူထွန်းလင်းပေးနိုင်သည် ကျွန်တော် S10 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုပွတ် software ကို။ အဆိုပါတိုးတက်မှုများသည် S10 တွင်ကြာမြင့်စွာကြာမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအောက်မှာရှိပါတယ်ည mode ကိုအတူဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးပုံရိပ်များနှင့်ပုံတူများကိုခံစားနိုင်စေရန် ပိုပြီးအစစ်အမှန်ကျနော်တို့အလှအပ mode ကိုမှသွားရန်အကြံပြုပါသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်မူဓာတ်ပုံများတွင်ကြည့်ကောင်းသည့်အတိုင်း၎င်းကိုမသုံးရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာ Samsung က selfie တွေပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာသတိပြုမိတယ်။
ကျနော်တို့ကဖုန်းကိုဖြစ်ကြသည် ဗွီဒီယိုကိုမိုဘိုင်းမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်အလင်းအခြေအနေအနည်းငယ်သာရှိပါကအနည်းဆုံးစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအကြိမ်အထိတိုင် S10 တွင်တွေ့ရသောဆူညံသံပိုမိုကြီးမားသည်ဟုဆိုရမည်။ မျှော်လင့်ချက်ဟာသူတို့ဟာဆူညံသံကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီးအလင်းနည်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာအလင်းအရင်းအမြစ်တွေမလုံလောက်ရင်ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ချဲ့ခြင်း၌သင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် မြင်ကွင်းတစ်ခုမှဆုံးဖြတ်သည်မိုက်ခရိုဖုန်းအသံအတိုးအကျယ်။ အမှန်မှာ၊ ဤလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေရန်ယခုတွင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်မွေးနေ့တွင်သား၏အသံကိုထင်ရှားစေပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ပြရန်အမှန်ပင်တန်၏။
ဒါဟာကျနော်တို့ Samsung ကိုဘယ်လိုနားမလည်ကြဘူးရှိရာ box ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်Audiojack မပါ ၀ င်ဘဲ USB Type-C နှင့်အတူ၎င်း၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းတွင်အခြေခံ adapters အချို့မပါဝင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Type-C သို့ adapter ကို ၀ ယ်ရမည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးက USB Type-C connection ကိုမထားဘူး။
ဖြန့်ချိတဲ့အချိန်မှာယူရို ၁,၁၀၀ ကျော်သွားတဲ့ဖုန်းအတွက်၊ အဲဒီ adapter တွေကိုထည့်စရာမလိုပါဘူးနှင့်အချို့သောဒေသများတွင်သူတို့ရှိသည်တဲ့အခါမှာပိုမို။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ဝယ်ယူသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ရှိလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ငါတို့လွမ်းတယ် တစ်ခါတစ်ရံမှာအသံ jack ကို connector ကိုရန်။ ထင်ရှားထက်ပိုပြီးအမှု။ PUBG mobile ကိုဆက်သုံးချင်ပြီးဘက်ထရီကလည်းအားနည်းနေတယ်။ USB Type-headphone များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကစားသည်။ Battle Royale တွင်ကစားရန်အရေးကြီးသည်။ သို့မဟုတ်နားကြပ်ကို ဆက်၍ ဆက်ပြီးအားသွင်းသည့်အခါ ဆက်၍ ဆက်ရန်နှစ်ဆ adapter ကိုဝယ်သည်။ ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကနားကြပ်ကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသံကိုမသုံးနိုင်ဘဲ ဆက်၍ ကစားရန်ဖုန်းကိုအားသွင်းရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ထဲသို့ယူရိုတစ်ရာထက်မကသောငွေကိုမသုံးစွဲပါကယနေ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုအဟုတ်, ငါတို့သူတို့အားအချိန်လေး၌သူတို့ကိုလက်လွတ်။
နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက် - သင်သည်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ထပ်မံချစ်မြတ်နိုးမည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောဖုန်းကိုသာကြည့်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးသောအရာအချို့တွင်နေနိုင်သည်။ ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားသူထွက်ခွာသွားသည်ဟူသောခံစားချက်သည်ထိုအရာဖြစ်သည် ၎င်း၏အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုချိန်ခွင်၌ပြည့်စုံသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်၊ Dolby Atmos စတီရီယိုအသံ၊ ၂၆၆ GB RAM သိုလှောင်မှု၊ ၆.၈ လက်မဖန်သားပြင်အတွက်ပေါ့ပါးသောမျက်နှာပြင်၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးရှေ့တွင်လှပမှု၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် fingerprint sensor၊ One One UI၊ ၎င်း၏ CPU သည်ဗိသုကာအသစ်များနှင့်အပူလွန်ကဲခြင်းကိုသတိမပြုမိစေရန်၊ ၎င်း၏လေထုလှုပ်ရှားမှုအတွက် S Pen၊ ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ထားသည့်ဘက်ထရီနှင့်အဆင့်တိုင်း၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံအတွက်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing ကိုထည့်သွင်းထားသော software အားလုံး။
၎င်းသည်မိုဘိုင်းဖြစ်သည် သင်ရက်သတ္တပတ်များကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှသင်ချစ်မြတ်နိုးလာမည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးနေ့ရက်များမဟုတ်ပါ။ လ၊ နောက်နှင့်နောက်ကဲ့သို့ပင် Samsung သည်ဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည့်အင်ဂျင်နီယာအပိုင်းအစအားဖြင့်သင်အားရကျေနပ်မှုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှလာလျှင်အရူးမလုပ်ပါနှင့်၊ Galaxy Note 10+ သည်၎င်းကိုနေထိုင်ပြီးလက်ကိုင်ထားပြီးသင်၏နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံကိုစမ်းသပ်ရန်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးဘာမှမရှိဘူး ရိုးရှင်းပါတယ်
နောက်ဆုံးတော့ Note Series ဖုန်းတစ်လုံးမှတစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူးဆိုလျှင်ယခုအချိန်သည်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည်မကြာမီခေါက်နှင့်အတူပေါင်းစည်းစေခြင်းငှါငါတို့သိလျှင်ထိုထက်ပို; တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့မှတ်စုအခြားအတွေ့အကြုံအမျိုးအစားမှပြောင်းလဲနေသောမြင်လိမ့်မယ်။
အသစ်သောဗိသုကာစွမ်းဆောင်ရည်အသစ် update များနှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်
Samsung က USB Type-C ကို A adaptor မပေးဘူး
နားကြပ်ဖြင့် PUBG Mobile ကိုဖွင့်နေစဉ်အတွင်းလက်ကိုင်ဖုန်းအားသွင်းရန်အတွက် usb type c adapter ကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်
ယူရို ၁,၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောဖုန်းမှဓာတ်ပုံသည်ပြောင်းလဲမှုများကိုရရှိသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » [ဗွီဒီယို] ၂ လအသုံးပြုပြီးနောက် Samsung Galaxy Note 10+ ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်အချစ်ဆုံးသောမိုဘိုင်း
ဘာစီလိုနာနှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် 2019 ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ကစားကစားရမည်နှင့်ဘယ်မှာကြည့်ရှုရမည်နည်း။